काँग्रेसमाथि विश्वास गरेर एकपटक फेरि भूल गर्दैछन् मधेशी मोर्चाले | सहारा टाइम्स
Home » Main-News » काँग्रेसमाथि विश्वास गरेर एकपटक फेरि भूल गर्दैछन् मधेशी मोर्चाले
काँग्रेसमाथि विश्वास गरेर एकपटक फेरि भूल गर्दैछन् मधेशी मोर्चाले
सविधानसभाबाट सविधान घोषणा अघि संघीयताको विवाद समाधान गर्न चार दल (काँग्रेस, एमाले र माओवादी) को बैठक बसेको थियो । बैठकमा काँग्रेसका सभापति (तत्कालिन वरिष्ठ नेता) शेरबहादुर देउवाले पश्चिका दुई जिल्ला त के एउटा रौं पनि दिन सकिन्न भनि भन्नुभएको थियो । आज त्यही देउवा मधेशी मोर्चाको प्यारो भएको छ ।
मधेशी मोर्चाका नेताहरु भन्छन्, उग्रराष्ट्रवादी विरोधी सरकारका नेतृत्व कर्ता केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनका लागि हामीले जे योगदान दिनुपर्छ हामी दिन्छौ तर सरकारमा जाँदैनौ ।’ मोर्चाका एक नेताले भने, हामीले उठाउँदै आएका माग प्रति काँग्रेस र माओवादी कस्तो प्रतिकृया देखाउँछ त्यसपछि मात्र सरकारमा जाने नजाने बारेमा निर्णय लिन्छौ अहिले सरकार ढाल्नका लागि मात्र सहयोग गरेका छौ ।
आज मधेशको जुन अवस्था छ त्यो काँग्रेस, खास गरि शेरबहादुर देउवाको कारणले भएको हो भने कुरा मधेशी नेताहरु यति छिट्टो कसरी बिर्सियो ? थारुहरुको छुट्टै प्रदेश दिनुपर्छ माग गरेपछि मधेशी मोर्चाका नेताहरुलाई बालुवाटारमा देउवाले कस्तो जवाफ दिएको त्यो कुरा आज ती नेताहरु आज कसरी विर्सियो ?
पूर्व तीन जिल्ला झापा, मोरगं र सुनसरी केपी शर्माले दुई नम्बर प्रदेशमा जान नदिने भनि पक्रेर बसेका छन भने पश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुर नदिने भनि देउवाले पक्रेर बसेका छन् भने यी दुई नेतामध्ये देउवा मधेशको प्रिय पात्र कसरी भयो ?
मधेश आन्दोलन काँग्रेसकै पालामा भयो । त्यसबेला ४० जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाउनु भयो । बाँकी २० जना ओलीको पालामा ज्यान गुमायो भने मधेशीका लागि देउवा कसरी प्रिय पात्र भयो ? तत्कालिन प्रधानमन्त्री स्व.सुशिल कोइरालाले वार्ताका लागि जति पत्र पठाए त्यो भन्दा कम पत्र अ‍ोलीले पठाएको छैन ।
सुशिल कोइरालाले मधेशी मोर्चाका नेताहरुलाई जसरी चिया विस्कुट खुवाएर पठाउनु हुनथ्यो त्यसरी नै ओलीले चिया विस्कुट खुवाएर पठाउनु भएको हो अनि देउवा कसरी भयो प्रिय पात्र ?
हो ओलीको बोली कडा छ । अलि छाडा बोल्नु हुन्छ तर मधेशी मोर्चासँगको विभिन्न बैठकहरुमा देउवाले बोलेका कुरा अहिले पनि मधेशी नेताहरुको कानमा गुन्जेकै होला । यदि मधेशी नेताहरु इमान्दार छन् भने देउवाले मधेशको बारेमा बोलेका कटुवचन सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
बरु एमाले र एमाओवादी नेतृत्वको सरकारबाट सम्झाएर बुझाएर सविधान संशोधन गराएर अधिकार सुनिश्चित गराउँदा उचित थियो । अब त झन अप्ठ्यारो भयो । सविधान संशोधनका लागि ५९७ सांसदबाट ४४७ को समर्थन चाहिन्छ नै। कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले जेसुकै सहमति गरेपनि सविधान संसोधनको लागि एमालेको साथ चाहिन्छ नै जो आउने दिनमा असम्भव देखिन्छ ।
काँग्रेसको संगठनको आधारशिला नै मधेश हो । र, त्यही भएर देउवाले मधेशी नेताको ढाडमा टेकेर मधेश कब्जा गर्ने दाउमा हुनुहुन्छ । मधेशवादी दलसँग झगडा गरिर्यो मधेश गुम्ने खतरा रहेको कुरा देउवाले राम्री बुझ्नु भएको छ, त्यही भएर उहाँले अहिले मधेशी दलको बुई चढ्न थाल्नु भएको छ र मधेशी नेताहरुले पनि आफ्नो बुई थापेकै हो ।
नत्र त्यत्रो मधेश आन्दोलनमा काँग्रेसले दमन गरेर ४० जनाको ज्यान लियो सोही दलका सभापतिलाई तमलोपाले नवलपरासीमा भएको महाधिवेशनमा अतिथि बनाएर लग्यो । त्यही सुरक्षाको कारण देखाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीलाई महाधिवेशनमा आउनबाट तमलोपाकै नेताहरुले रोक लगाउनु भएको थियो । मधेशी जनताको त्यो भन्दा ठूलो अपमान के हुन सक्छ ।
त्यही दिन देउवाप्रति मधेशमा आधाभन्दा बढी आक्रोश कम भयो । त्यति मात्र होइन, रिले अनसनमा बोलाएर पनि ऐक्यवद्धता दिन लगाए । मधेशी नेताहरुले सोच्दो हो कि देउवा मधेशप्रति नरम भएर आएको हो । अब मधेशको सबै समस्या समाधान हुन्छ भने सोचेका छन् भने त्यो दिवास्वप्न भन्दा अरु केही हुन सक्दैन । देउवाको रणनीति हो मधेशमा टेक्ने ।
काँग्रेस एक नम्बरको पार्टी हुँदा मधेशवादी दलको मधेशमा के हालत भयो छर्लगं छ । माओवादी एक नम्बरको पार्टी हुँदा मधेशवादी दलको अवस्थामा मधेशमा के थियो त्यो पनि छर्लगं छ । अर्थात भोटको खेलमा पनि काँग्रेस मधेशका लागि ठूलो घातक हो त्यो कुरा पनि मधेशी दलले विर्सिनु हुँदैन ।
अर्को कुरा, माओवादीसँग मधेशी मोर्चा पुनः सति जान लागेका हुन् । आश्चर्य लाग्छ, १६ बुँदे सम्झौताको घटना मधेशी मोर्चाले यति छिट्टो कसरी विर्सियो ? जुन बेला माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड गठबन्धनको नेतृत्व गरेर आन्दोलन गरिरहेका थिए र एकाएक मधेशी मोर्चालाई बीच बाटोमै छाडेर एमाले, काँगेससँग मिलेर १६ बुँदे सम्झौता गरेर सरकारमा गएका थिए । आज त्यही मधेशी मोर्चाका नेताहरु माअ‍ोवादीको गठबन्धनलाई सहयोग गरेर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदैछ ।